Falanqaynta Giraanta Video Albaabka 2, video intercom si isha loogu hayo cida guriga imaaneysa | Wararka IPhone
Imaatinka kaamirooyinka ilaalada ee ku xiran taleefankeena casriga ah ayaa bedelay fikradda ilaalada fiidiyowga waxaad na siisaa qalab aad u tiro badan oo la jaan qaada ku dhowaad baahi kasta oo aad u baahan tahay. Batariga, kuxiran shabakada korantada, gudaha, banaanka ... iyo hada waxay sidoo kale u dhaqmayaan sidii fiidiyoow fiidiyoow ah.
Ring, oo ah nooc sannado badan khibrad u leh suuqa Mareykanka, ayaa na siinaya qaabkeeda cusub Giraan Video Doorbell 2, albaabka gurigaaga u gaar ah kaas oo sidoo kale u dhaqma sidii fiidiyoow is-dhexgal iyo kamarad ilaalin ah taas oo kugu wargalinaysa dhaqdhaqaaq kasta oo laga ogaado hawshiisa. Waxaan si wadajir ah ugu tijaabinay qalabka 'Chime Pro' waxaanan kuu sheegeynaa sida aan u aragno muuqaalkeena oo ay ku jiraan.
1 Giraan Video Albaabka 2 iyo Chime Pro
5 Lacag aan qasab ahayn laakiin lagu taliyay
Giraan Video Albaabka 2 iyo Chime Pro
Wicitaanka Video Doorbell 2 wuxuu u shaqeeyaa sidii albaabka albaabka iyo kamaradda ilaalinta. Iyada oo ay suurtagal tahay in la soo qabto sawirrada 1080p iyo aragtida habeenka, waxaad u isticmaali kartaa sidii albaabka gurigaaga. Adoo riixaya batoonkiisa hore waxaad ka helaysaa ogeysiin taleefankaaga casriga ah waxaadna arki doontaa qofka soo wacaya oo la hadlaya, sida haddii ay ahayd shir fiidiyoow ah, taas oo ay ugu mahadcelinayaan makarafoonkeeda ku hadla iyo kuwa ku hadla. Waxaad sidoo kale heli doontaa ogeysiisyo ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo ka dhaca goobtaada waxqabadka, taas oo la beddeli karo, kaydinta fiidiyowga la duubay daruuraha si aad u daawan karto ama uga soo dejisan karto qalabkaaga markasta oo aad rabto.
Chime Pro waa a Qalab ikhtiyaari ah oo aad isla iibsan kartid qaybta gelitaanka albaabkaaga fiidiyowga oo u dhaqma sidii fidiyaha WiFi iyo albaabka. Haddii calaamadda WiFi ee routerkaagu aanu ku filnayn inuu gaadho halka ay ku taal kamaradda Ring, qalabkani wuxuu u dhaqmi doonaa sidii ku-celin WiFi ah, xallinta dhibaatadan. Intaas waxaa sii dheer, markii qof riixo badhanka galitaanka albaabka fiidiyowga, wuxuu u dhaqmi doonaa sida albaabka oo kale, marka kasokow ogeysiinta ku saabsan iPhone-gaaga iyo iPad-kaaga waxaad maqli doontaa gambaleelka albaabka loo qaabeyn karo oo muggiisana lagu hagaajin karo. By the way, haddii aad rabto inaad sii wadato adeegsiga ringtone-kaaga caadiga ah, waad sameyn kartaa haddii ay ku habboon tahay (tones)
Wax kasta oo ay ka kooban tahay 'ring video intercom' waa wax lala yaabo, maadaama ay ku jiraan gabi ahaanba wax kasta oo aad ugu baahan tahay isticmaalkeeda iyo rakibideeda. Laga soo bilaabo darawalka laba-dhammaadka leh illaa dowels iyo xitaa qoditaanka daloolka godadka derbiga. Heer si markaa si fiican loo dhigo, fiilada dib-u-buuxinta bateriga (microUSB), boolal loogu talagalay hagaajinta, shaashad nabadgelyo si looga hortago xatooyada iyo laba weji, mid aluminium cawlan ah iyo midka madow, si aad u doorato midka ugu habboon ee ku habboon wejigaaga.
Rakibaadda waa mid aad u fudud, awood u leh inaad beddesho gambaleelkaaga caadiga ah ama aad si madax-bannaan u dhigto. Ahaanshaha aalad ku shaqeysa baytariga, kuma tiirsanaan wax soo saar koronto, sidaa darteed waxaad xoriyad buuxda u leedahay inaad dhigato halka ay adiga sida ugu fiican kuugu shaqeyso. Sanduuqa waxaa sidoo kale ku jira laba qalab si loogu siiyo jaanis toosan ama toosan., si loo gaaro aragtida ugu fiican ee suuragalka ah. qiyaastii 10 daqiiqo waxaad heleysaa qalabkaaga oo diyaar u ah inaad tagto. Waxaa jira suurtagalnimada ku xirnaanta shabakadda korantada, taas oo ay lagama maarmaan u tahay inaad haysato tarjumaan iyo dawan elektaroonig ah.
Mid ka mid ah shaki-gelinta ay is-weydaarsiga fiidiyowgaan kor u qaadayso ayaa ah suurtagalnimada in la xado. Waxay leedahay 'ladagaalanka xatooyada' si ay u adkaato, laakiin ma aha wax aad u adag in la helo xoogaa firijiye ah oo ka saari kara. Haddii Qalabkaaga 'Ring Video Doorbell' uu yahay mid la heli karo oo aad u malaynayso inay u badan tahay in la xado, si fiican u raadi meel kale ama kireysto qorshe kahortag giraan oo daboolaya suurtagalnimada (gadaal ayaan ka sharixi doonaa).
Qaabeynta waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo codsiga Ring, oo aad ka heli karto App Store, oo ku habboon iPhone iyo iPad oo gebi ahaanba bilaash ah. Waa habka caadiga ah ee loogu xirayo shabakadda WiFi (2,4GHz) guriga iyo voila. Waa inaad markaa si fudud ugu qaadataa dhowr daqiiqo dejinta mugga dhawaaqa, aagga ogaanshaha dhaqdhaqaaqa, iyo codka wicitaannada iyo ogeysiisyada dhaqdhaqaaqa. Runtii waa wax dareen leh oo fudud mahadsanid codsiga.
Xusuus gaar ah waxay u baahan tahay qaabeynta aagga lagu ogaado dhaqdhaqaaqa. Wicitaanka Video Doorbell 2 ayaa kuu soo diri doona ogeysiisyo markay ogaato dhaqdhaqaaq ka dhexjira muuqaalkiisa muuqaalka, kaas oo sababi doona duubitaan dhowr ilbiriqsi ah iyo ogeysiin ku saabsan qalabkaaga. Laakiin tani waxay si xun u saameyn doontaa noloshaada batteriga.Marka waa inaad heshaa isku dheelitirnaan dhammaystiran si aad uga fogaato inuu batterigu kaa dhammaado dhowr maalmood ka dib ama aad u hesho ogeysiis shantii daqiiqoba mar.
Sida laga soo xigtay Ring load of baytarigu wuxuu soconayaa ilaa 6 bilood (xitaa sanad) isticmaalka caadiga ah. Xaaladdayda wali wali ma dhamaan bil kadib isticmaalkeeda, laakiin waxaan ka shakisanahay inay gaari doonto tiradaas, in kastoo ay run tahay in markii ugu horreysay aan helay ogeysiisyo badan illaa aan ku guuleystey inaan hagaajiyo aagga baaritaanka ku habboon. Si aad batteriga dib ugu buuxiso waa inaad hore u qaaddaa (fur) oo aad ka saartaa si aad ugu buuxiso fiilada microUSB ee sanduuqa ku jirta, iyadoo qaadanaysa 4-5 saacadood inaad si buuxda u buuxiso.
Ma jiraan waxyaabo badan oo laga dhaho sida ay u shaqeyso fiidiyowgaan: qof ayaa garaacaya gambaleelka, Chime Pro ayaa garaacaya waxaana lagugu wargelinayaa iPhone iyo iPad, waad fureysaa barnaamijka, arag cidda uu yahay oo aad la hadasho ama si toos ah albaabka u fur. Tani waa shaqooyinka lagama maarmaanka u ah Ring Video Doorbell 2, sida isgaarsiinta albaabka fiidiyowga. laakiin laga soo qaato iPhone-kaaga halkii laga heli lahaa taleefan albaab leh oo lagu dhejiyo derbiga hoolka weyn. Waa wax aad u habboon in la arko cidda ka soo waceysa meel kasta, xitaa beerta gurigaaga. Xitaa markaad guriga ka maqantahay, ilaa intaad leedahay qadka internetka, waad la hadli kartaa qofka kuu soo wacaya oo u sheegtaa inaadan joogin, oo ku habboon wadayaasha.
Laakiin ma aha oo kaliya inay u shaqeyso sidii fiidiyoow fiidiyoow ah, laakiin waxay sidoo kale u dhaqmeysaa sida kamarad ilaalin ah, sidaa darteed waxay kugu wargelin doontaa dhaqdhaqaaq kasta oo la ogaado. Ogeysiinta waxaa weheliya muuqaal kooban oo daruuraha ku kaydsan oo aad daawan karto markasta oo aad rabto, iyadoo ku xidhan qorshaha Giraanta ee aad shaqaysato, wax aannu hoos kaga hadli doonno. Fiidiyowyada lagu kaydiyo daruuraha ayaa lagu soo dejisan karaa qalabkaaga ama laguugu soo diri karaa farriin, wax aad waxtar u leh mararka qaarkood. Tayada fiidiyowyadu aad ayey u fiican tahay, xitaa habeenkii, oo waxay kuu oggolaanayaan inaad dhaweyso oo aad shaashadda shaashadda si aad u aragto faahfaahinta.
Digniinta dhaq dhaqaaqa waxaa lagu qaabeyn karaa iyadoo la dejinayo muddooyinka "Ha Qasan" ama xitaa waqtiyo go'an marka ogaanshaha uu joojiyo ku ogeysiintaada si looga fogaado inaad xanaaqdo. Waxaa laga yaabaa inay tahay qaybta ugu mudan in la isku dayo, tan iyo marka lagu daro saameynta nolosha batterigaSidii aan horeyba u sheegnay, baabuur kasta oo hor mara gurigaaga hortiisa in lala socodsiiyo wuxuu noqonayaa mid dhib badan.
Lacag aan qasab ahayn laakiin lagu taliyay
Khasab ma aha in la yeesho qorshe Ilaalin Giraan. Adiga oo aan bixin wax khidmad ah bil kasta, waxaad sii wici kartaa wicitaanadaada fiidiyowgaaga, la hadal wicitaanka oo xitaa waxaad heli doontaa ogeysiisyo dhaqdhaqaaq oo waxaad awoodi doontaa inaad daawato fiidiyowga tooska ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad waayi doontaa kaydinta daruuraha fiidiyowyada, markaa haddii aad seegto ogeysiis ma awoodi doontid inaad aragto waxa saxda ah ee dhacay.
Laga bilaabo € 3 bishiiba (€ 30 sanadkii) Waxaad haysan kartaa ilaa 60 maalmood oo fiidiyow ah oo lagu kaydiyo daruuraha waadna soo dejisan kartaa oo aad iyaga la wadaagi kartaa. Lacagtani waa kamarad kasta oo aad rakibtay. Haddii aad leedahay wax ka badan laba kamaradood, qorshaha sare ee € 10 bishii (€ 100 sanadkii) kuwaas oo ay ka mid yihiin, marka lagu daro dhammaanba kor ku xusan, dhammaan kaamirooyinka aad rabto qiimo dhimista iibka alaabada iyo kahortaga dhaawaca iyo xatooyada qalabkaaga gabi ahaanba bilaash ka ah haddii ay wax ku dhacaan.
Qaybta 'Video Video Doorbel' ee isgaarsiinta ayaa si dhammaystiran u dhammaystiraysa howlaha intercom ee gurigaaga iyo kamarad lagu ilaaliyo irridda. Iyada oo nidaamkeeda ogeysiinta iyo duubista sawirada Full HD Wax dhibaato ah kuma lahaan doontid inaad aqoonsatid oo keliya cidda garaacaysa albaabkaaga laakiin sidoo kale kuwa ku soo duulaya ee aan loo baahnayn. Waxay sidoo kale leedahay aragti habeen wanaagsan, iyo waqtiyada jawaabta si loo daawado fiidiyowyadu ma badna.
Waxay ku dhowdahay inay qasab tahay inaad iibsato qorshe bille ah ama sanadle ah, laakiin dhibaato weyn ma ahan maadaama qiimaha aasaasiga ah uu yahay mid aad loo awoodi karo (€ 30 sanadkiiba) wixii aad hesho illaa 60 maalmood oo aad ku duubayso daruuraha. Haddii aad rabto nidaam ilaalin iyo is-dhexgal fiidiyow ah oo aan dhib lahayn oo si fudud loo rakibo, midkani kaa niyad jabi maayo.. Waxaa lagu heli karaa € 199 websaydhka Giraan iyo Amazon (oo mararka qaarkood la bixiyo) tani waa mid ka mid ah kamaradaha ugu xiisaha badan fiidiyoowga suuqa ee hadda jira.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka Ring sidoo kale waa buugga weyn ee kaabayaasha jira ee jira, laga bilaabo baararka qoraxda ee dib loogu soo celinayo baytariyada ama Fidiyeyaasha WiFi ee u shaqeeya sidii albaab albaab oo dheeri ah, sida Chime Pro. Waa wax aad u faahfaahsan in cod-bixiyayaashan sidoo kale laga beddeli karo dalabka laftiisa.
Riix Video Doorbell 2
Fududahay, rakibid aan xadhig lahayn
Codsi si fiican loo qaabeeyey oo dareen leh
Duubista 1080p iyo aragtida habeen wanaagsan
Ogeysiisyada ringtoneka ee la adeegsan karo
Qorshayaal qiimo jaban oo aad u jaban
Ku dhowaad waa qasab in la bixiyo khidmadda bil kasta
Si fudud wax loo xado haddii aad dhigto meelo aad u fudud oo la heli karo
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Falanqaynta Giraanta Sawirka Albaabka 2, isgaarsiin fiidiyoow ah si isha loogu hayo cidda guriga imaaneysa
dekedda nahama dijo
Sideed uga soo kaban kartaa fiidiyowyadii hore xitaa markii mudada 30-ka maalmood ay horay u dhaaftay
Jawaab ku bixi dekedda nahama